IIMpanjaka 19: 1-37
IIMpanjaka 18 IIMpanjaka 19 IIMpanjaka 20
ary izy naniraka an'i Eliakima, lehiben'ny tao an-dapa, sy Sebna mpanoratra ary ny lohan'ny mpisorona samy nitafy lamba fisaonana hankany amin'Isaia mpaminany, zanak'i Amoza,
ary hoy ireo taminy : Izao no lazain'i Hezekia : Andro fahoriana sy famaizana ary fanalam-baraka ity andro ity; fa mby ao am-piterahana ny zaza, nefa tsy misy hery hiterahana azy.
Angamba ho ren'i Jehovah Andriamanitrao ny teny rehetra nataon-dRabsake, izay nirahin'ny mpanjakan'i Asyria tompony hihaika an'Andriamanitra velona, ka mba hovaliany izy noho ny teniny izay efa ren'i Jehovah Andriamanitrao; koa aingao ny fivavakao hamonjy izay mbola sisa.
Ary hoy Isaia taminy : Ambarao amin'ny tomponareo hoe : Izao no lazain'i Jehovah : Aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompan'iretsy ankizilahin'ny mpanjakan'i Asyria iretsy Ahy.
Fa, indro, Izaho efa hanisy fanahy ao anatiny, ary hahare siosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny; dia hataoko lavon-tsabatra any an-taniny izy.
Ary nony ren'i Sankeriba ny amin'i Tiraka, mpanjakan'i Etiopia, nanao hoe : Indro, avy hiady aminao izy, dia naniraka olona indray ho any amin'i Hezekia izy nanao hoe :
Izao no holazainareo amin'i Hezekia, mpanjakan'ny Joda : Aza mety hofitahin'ny Andriamanitrao Izay itokianao hianao hoe : Jerosalema tsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanjakan'i Asyria.
Indro, hianao efa nandre izay nataon'ireo mpanjakan'i Asyria tamin'ny tany rehetra, dia ny nandravany[heb. nanaovany herema.] azy; ka hianao kosa va no ho voavonjy ?
Moa nahavonjy azy va ireo andriamanitry ny firenena noravan'ny razako, dia Gozana sy Harana sy Razefa ary ny taranak'i Edena, izay tao Telasara ?
Dia noraisin'i Hezekia tamin'ny tànan'ny iraka ny taratasy ka novakiny, dia niakatra nankao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah.
Ary Hezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe : Ry Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely ô, Izay mipetraka amin'ny kerobima, Hianao dia Hianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa Hianao no nanao ny lanitra sy ny tany.
Ary Isaia, zanak'i Amoza, dia naniraka hankany amin'i Hezekia, nanao hoe : Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely : Ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin'i Sankeriba, mpanjakan'i Asyria, dia efa nohenoiko.
Koa izao no teny nolazain'i Jehovah ny amin'i Sankeriba : Manao tsinontsinona sy mandatsalatsa anao Ziona, zanakavavy virijina : Mihifikifi-doha mahita anao mandositra Jerosalema zanakavavy.
Fa iza no nohaikainao sy nompanao ? Ary hanohitra an'iza no nanandratanao ny feonao, Sy nampiandrandranao ny masonao any ambony ? Hanohitra ny Iray Masin'ny Isiraely.
Ny irakao no nihaikanao ny Tompo hoe : Tamin'ny kalesiko maro no niakarako Tany an-tampon'ny tendrombohitra, Tao afovoan'i Libanona, Ary hokapaiko ny sedera avo sy ny kypreso voafantina; Dia hiditra any amin'ny faran'ny azo iakarana ao aho Sy any amin'ny alany midokadoka.
Izaho no nihady ka nisotro rano vao niseho,[Na: ranon'ny firenena hafa.] Ary ny faladiako no handritako ny ony mbamin'ny lahindrano rehetra any Egypta.[Heb. Mazora.]
Tsy mbola renao va, hoy Jehovah, fa hatry ny fony ela no nanomanako izany, Ary hatramin'ny andro taloha no nikasako izany ? Ankehitriny dia efa nahatanteraka izany Aho, Ka dia nandrava tanàna mimànda ho tonga korontam-bato hianao.
Satria efa tezitra amiko hianao, Ary efa tonga ato an-tsofiko ny fireharehanao, Dia hasiako ny masom-biko ny oronao, Ary hasiako ny lamboridiko ny vavanao, Ary hampivereniko amin'ny làlana izay nihavianao hianao.
Ary izao no ho famantarana ho anao kosa : Hihinana ny maniry ho azy avy tamin'ny voa mihintsana hianareo iray taona, ary amin'ny taona manaraka dia ny kolokolon'izany, fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafaza hianareo, ka mijinjà, ary manaova tanimboaloboka, ka mihinàna izay vokatra eo.
Koa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'i Asyria : Tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, na handefa zana-tsipìka ho ato, na hitondra ampinga eo anoloany, na hanandratra tovon-tany hamelezany ity.
Ny làlana izay nihaviany ihany no hiverenany, fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah.
Ary raha niankohoka tao an-tranon'i Nisroka andriamaniny izy, dia nasian'i Adrameleka sy Sarezera zanani-lahy ny sabatra izy; ary dia afaka nandositra nankany amin'ny tany Ararata izy mirahalahy. Ary Esara-hadona zanani-lahy no nanjaka nandimby azy.